सिगांपुर जाँदै प्रधानमन्त्री ओली : प्रचण्डले पाउलान् कार्यकारी अध्यक्ष ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सिगांपुर जाँदै प्रधानमन्त्री ओली : प्रचण्डले पाउलान् कार्यकारी अध्यक्ष ?
भदौ ५ गते, २०७६ - ०९:२२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परिक्षणका लागी आज अपरान्ह सिंगापुर जाने भएका छन् ।
विहिबार दिउसो बजे थाई एयरमार्फत सिंगापुर जान लागेका ओली आज भन्दा १० दिन अघि मात्रै १ हप्ता लामो उपचार गरी नेपाल फर्किएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छन् । यसअघि पनि उनले त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए ।
ओलीसँगै प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा। दिव्या सिंहलगायत पनि सिंगापुर जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
मिर्गौला प्रत्योपणका विरामीहरुले निश्चित समयपछि औषधि परिवर्तन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि औषधि परिवर्तन गर्नुपरेको छ । नयाँ औषधिले काम नगरे नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने विकल्प रहन्छ ।
यसअघि आजै विहान जारी नेकपाको सचिवालयको बैठकमा ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पने सहमति यसअघि भएको एक नेताले बताएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने पूर्व सहमतिकै आधारमा विभाग लगायत अन्य जिम्मेवारीहरुमा यसअघि सहमति जुटेको थियो ।
भदौ ५ गते, २०७६ - ०९:२२ मा प्रकाशित